Pape François : Inona tokoa ny anjara andraikiny ?
Mampikambana ny fiangonana rehetra maneran-tany ho iray ny Papa ray Masina.
Ny papa ray Masina no atao hoe dimbin’i Masindahy Piera Apostoly, raha eo amin’ny finoana katolika. Ny papa ihany koa no evekan’ny diosezin’I Roma no sady filoham-panjakana ao Roma renivohitr’Italia.
Sehatra hoan'ny Zava-kanto : Nosokafana tetsy Ivandry ny “City Art”
Nisokatra omaly tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny La City Ivandry ny “City Art”, sehatra ivelaran’ireo hetsika ara-kolotoraly eto Madagasikara.
Olana sedrain’ireo malagasy maro manan-talenta manerana ny nosy ny tsy fisian’ny sehatra hahafahan’izy ireo maneho ny kantony. Tsy mbola mahasahana ny ivon-toerana hampafantarana ireo mpanakanto eto Madagasikara ny isan’ireo sehatra ara-kolotoraly misy eto an-toerana.
Hanomboka rahampitso manoloana ny tsangambaton-dRalaimongo etsy Analakely ny Podium karakarain'ny avy eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika entina hanamarihana ny fetim-pirenena. haharitra 5 andro ny hetsika ary mpanakanto maro no hifandimby hiseho sehatra eny mandritra izany.
Ora sisa no isaina, dia hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny Kermesin’ny foloalindahy malagasy, etsy Betongolo, eo amin’ny kianjaben’ny tafika. Haharitra 4 andro ny kermesy, izay amin’ny endriny vaovao, ahitana ireo karazan-dalao malaza maro entina hampiravo sy hampialavoly ny mpianakavy.